:: My Splendit iDEAS
LinktoEverything is Bloggable!
အမှန်အတိုင်းပြောရရင် စိတ်ရဲ့ထွက်ပေါက်အနေနဲ့ blog ကိုလုပ်ဖြစ်သွားခဲ့တာပါ။ ဟိုးအရင်ကထဲက လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်မိတ်ဆွေ က်ိုမောင်လှ က blog ကို
စ လုပ်တုန်းကတော့ သိပ်စိတ်မပါသေးတာနဲ့ account creat လုပ်၊ တစ်ခါလောက်ပဲ post တင်ပြီးပစ်ထားလိုက်တယ်...မိတ်ဆွေလေး cmsmdy uk မှာကျာင်း သွားတက်တော့ သူ့ရဲ့blog ကိုကြည့်ဖြစ်သွားတယ်..စိတ်ရဲ့ပြူတင်းပေါက်ဆိုတာနားလည်လိုက်တယ်...အဲဒီ့ကာလတုန်းက အလုပ်တွေရယ် ဟိုဒီ
ကိစ္စတွေရယ်ရှုပ်နေတယ်..တစ်ခါ blog ဆိုတာ စိတ်ရဲ့ပြူတင်းပေါက်တင်မက နည်းပညာပေါင်းကူးတံတားတစ်ခုဆိုတာကိုလည်း သ်ိလိုက်တယ်.
ကိုမောင်လှရဲ့ blog မှာမြန်မာလိုရေးထားတာတွေတွေ့ရတော့ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားလာတယ်..ဘာလို့လည်းဆိုတော့ Myanmar Typing ပရိုဂရမ်လေးလည်း
လုပ်ထားတာဆိုတော့ မြန်မာယူနီကုဒ်ကို ဆက်လေ့လာချင်နေတာ..အဲ့တာနဲ့ ကိုမောင်လှရဲ့အကူအညီယူပြီး sannoo.blogspot.com ကိုပြန်စဖြစ်သွားတယ်။
ဒီဇိုင်းကိုအရမ်း crazy ဖြစ်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ site လေးကိုလှလှပပလေးဖြစ်အောင် ဟိုပြင်ဒီပြင်အချိန်အတော်ပေးဖြစ်သွားတယ်.နောက် problem က
post တွေတင်ရတာပါပဲ..အချိန်ပေးပြီးလုပ်ရတယ်..visit လုပ်တဲ့သူတွေကိုအားနာလို့..တစ်ခါတစ်ခါကျတော့လည်း အလုပ်အရမ်းများတာရယ် speed
ကအရမ်းကျတာရယ်ကြောင့် post မှန်မှန်တင်ဘို့ခဲယဉ်းသွားပြန်တယ်.blogger တစ်ယောက်ရဲ့စေတနာကဘာလည်းဆိုတော့ visit လုပ်တဲ့သူတွေကို
အကျိုးရှိမဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုပေးချင်တာပါပဲ .. အတတ်နိုင်ဆုံးလည်းကြိုးစားပါတယ်..ရသပဲဖြစ်ဖြစ် သုတပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့.။ပြီးတော့ ကိုယ်ဖန်တီး
ထားတဲ့ program လေးတွေကိုသုံးကြည့်စေချင်တယ်.အဲဒီ့တော့ web ပေါ်မှာ သုံးလို့အဆင်ပြေအောင် program လေးတွေကိုပြင်စရာရှိတာတွေ ပြန်ပြီး
ပြင်ရပြန်ရော.cmsmdy ရဲ့အကူအညီလည်းရပါတယ်..myoaung-mdy လည်းကူပါတယ်..တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်အပြန်အလှန် ဖေးမရင်းနဲ့ပဲ
blog disease ကစွဲတော့တာပဲ..ရောဂါပေါ့ဗျာ...တဆင့်ဆက်တွေးတော့ ဒါတွေလုပ်တာ ဘာများအကျိုးရှိလည်းပေါ့...မိတ်ဆွေတွေတိုးလာတယ်..သိချင်တာတွေမေးလို့ရတယ်..ပြောချင်တာတွေရေးလို့ရတယ်.. မကျေနပ်သေးဘူး...how can i make money by using blogspot ? စိတ်ကူးယဉ်တာပေါ့နော်..တခါတခါလည်း
စိတ်ကူးလေးတွေတည့်သွားတော့အရမ်းပီတိဖြစ်မိပြန်တယ်..Myanmar Blogger အားလုံးကိုလေးစားပါတယ်.MCPA မှာ everything is blogable အစီအစဉ်ကို
သိရတော့တကယ်ပဲဝမ်းသာပါတယ်...ဒါပေမဲ့ကျမ်းမာရေးလည်းသိပ်မကောင်းလို့မရောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး...blog တွေမှာပြန်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ် တကယ်ရောက်ခဲ့ရသလိုပါပဲ..
Cbox idea ကိုသဘောကြမိတယ်.ကိုမောင်လှကြီးဘာတွေရေးသွားပါလိမ့်..Mandalay က blogger တွေကို မိတ်ဆွေတွေကလွဲလို့လူနဲ့နာမည်နဲ့မတွဲမိဘူး.
အခုမှတချို့ကိုသိရတော့ blog design လှလှလေးတွေဖန်တီးနိုင်သလို လူတွေကလည်းချောချောလှလှလေးတွေပဲ..(မုန့်ကျွေးနော်..).ဒေါ်ရတနာ၊ S potato
နဲ့ ကိုဇော်မျိုးအောင်တို့..ကျွန်တော်တို့ ( ကျွန်တော်နဲ့ကိုမျိုးအောင်) ဆီတကူးတက ရောက်လာပြီး blog member card လေးတွေပေးသွားတာ
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..လူတွေကြားထဲသိပ်မနေချင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို နောက်တခါ seminar လိုမျိုးတွေမှာလာဘို့ပြောတယ်..တတ်နိုင်တာလေးတွေကူညီလုပ်ကိုင်ပေးပါ့မယ်လို့စိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းပြောလိုက်ပါတယ်.... နောက်ပြီး wheel of fortune နှစ်သက်သူတိုင်း program ကိုလွတ်လပ်စွာ link နိုင်ပါတယ်..Secrete of TAROT
ကိုလည်းပိုပြီးအဆင်ပြေအောင်ကြိုးစားပါဦးမယ်။ Myanmar blogger အားလုံး ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာ ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေ...
Posted by mr sann oo at 7:11 PM
ဆုတောင်းကြောင့် ကျန်းမာနေပါတယ်။ ဘလော့ရဲ့ တခြားပို့စ်တွေ သိုးလေး မတွေ့မိလို့ပါ။ ဒါပဲ တင်ထားတာလား။ သိုးလေးလည်း ပထမဦးဆုံး စသိတဲ့ အပြင်ဘလော့က ကိုမောင်လှဘလော့ဂ်ပါ။ ပထမဦးဆုံး မြန်မာလိုရေးလို့ရတာလည်း ကိုမောင်လှ လုပ်ပေးထားတဲ့ win2zawgyi font ဆိုတဲ့ box လေးကနေ ရေးလို့ ရတာပါ။ ဘလော့ပို့စ်တွေ တင်ပါ။ အားပေးမှာပါ။
The moral police of the society argue that the unprecedented success of Generic Viagra is not the result of an eye-popping scientific and medical breakthrough, Viagra isaculmination of the media indoctrination on the male sexual gratification. Rather than portraying Cialis asadrug exclusively for erectile dysfunction,amedical condition that may be either physical or psychological, the promos spinadifferent yarn.
၃၈ဖြာမင်္ဂလာ - 38 Auspicious !
What is BLOG & Why i BLOG
Secrete of TAROT & Wheel OF Fortune
What isaRAID Drive ?